Taura Dhipatimendi rako reIT muFirefox | Martech Zone
Ini ndinofunga ndanga ndakaparadzwa munguva yakapfuura kana zvasvika kune madhipatimendi eIT. Ndakamhanya netiweki pabasa rangu rekutanga uye ndaive mukomana ane zvese zvekutambisa mudhipatimendi (kunze kwaDirector wangu panguva iyoyo, ini ndaigara ndichimutengera iye kutanga).
Kufamba pakati pemabasa akasiyana muKushambadzira neTekinoroji kwakandiisa pamativi ese emusuwo weIT saka ndinoziva maitiro zvinoshungurudza kusava nematurusi aunoda. Kunyangwe zvichinyanya kuoma kutsigira, ndiri mutendi akasimba kuti tekinoroji inofanirwa kuunza kufambira mberi uye kugona. Hazvigone kuita izvozvo kana iwe wakakiiwa pasi. Shamwari yangu yakanaka Adam Small, uyo anomhanya a Mobile Kushambadzira kambani pano muIndipolis, inoisa kwakakwana… idhipatimendi rako reIT inobatsira iwe kana zvinoremadza iwe?
Ndadzoka kudivi rekushambadzira remusuwo nebasa rangu razvino uye ndiri kuyedza kutamba nemitemo - asi hazvisi nyore. Ini ndoziva ese akakwana software kunze uko inowedzeredza zuva rangu - uye ini handigone kushandisa chero chayo. Ini ndiri paPC ikozvino pane yangu yakatendeka Mac. Zviri kunetsa.
Ini ndiri kukwikwidza, hazvo! Panzvimbo pekugunun'una (kunze kweblog rangu), ini ndinotamba nemitemo zvandinogona uye kuyedza kuona zviri kunze kuti ndibatsire. Mumwe wevaponesi vangu vakuru anga achimhanya Firefox. Haisi chete inonakidza browser, asi mawedzera-ons anonyanya kushamisa:
FireFTP - inonakidza FTP application yandinogona kumhanya yakananga muFirefox. Ndezvemahara (asi ndokumbira upe - hafu yezvipo zvese enda kunobatsira). Iine zvese zvaunoda kune yakasimba FTP mutengi!
Twitbin - mutengi weTwitter anomhanya akananga mubato rezasi reFirefox. Izvo hazvina kutsetseka sekumhanyisa yako wega mutengi, senge Twirl, asi zvine hunyengeri. Ini ndinoshuvira dai vaisa mamwe ma tabo pamusoro payo kuti zvive nyore kuenda kubva kumhinduro kuenda kunanga mameseji, nezvimwe.
RuvaraZilla - Unombofanira kutora ruvara kubva pawebhu peji? Chishandiso chikuru chekuzviita!
Greasemonkey - inoshamisa yekuwedzera-iyo inokutendera iwe kunyora uye kusanganisa ako wega zvinyorwa mumapeji. Kune mamirioni ezvinonakidza GreaseMonkey zvinyorwa kunze uko izvo zvinogona kukubatsira iwe ne gmail uye toni yemamwe maapplication. Buda Girisipot yezvazvino!
ZVIMWE ZVAKAITIKA: Shandisa CHENYENZO neGreasemonkey, pane zvinyorwa kunze uko zvinozoedza kutora ruzivo rwekupinda kune mawebhusaiti emari.
Akademianele - inoshamisa inonakidza yekuwedzera-iyo inoshandura PC yako kana Mac kuita Media kubhurawuza chikara!
Foxulss - nzvimbo dzenguva dzinokuvhiringa here? Ichi chishoma chidiki chekuwedzera-pane icho chinogona kukupa iwe ino yazvino nguva kutenderera pasirese.
ScribeFire - kune kunyange blog blog mhariri iwe yaunogona kuisa chaiko muFirefox iyo inoshandisa XML-RPC, yakajairwa mukati meakawanda mabloggi mapuratifomu ekutumira zvemukati. Ini handishandisi iyi, ndinowanzo namatira kune ol 'mupepeti muWordPress, asi ichiri chakakura!
Zvichida chikamu chakanakisa cheichi ndechekuti iwe kazhinji haudi Administrator kodzero yekuisa izvi zvekuwedzera munzvimbo, kuitira kuti iwe ugone kuisa akawanda maturusi akanakisa aunogona kushandisa pasina kubhaisa wako IT mukomana. Tora vako IT vakomana kuti vaise Firefox nhasi! Ehezve, kana Firefox ikatanga kurovera pauri ... usashevedze yako IT rubatsiro tafura ... tanga kubvisa mamwe eaya mawedzera-ons!
Tags: wedzera-wandakupiswaFirefoxfirefox kuwedzera-onskushambadzira add-onskubika
Vashoma kwazvo Vanogona Kuziva Utachiona seizvi!
Zvita 4, 2008 na9:26 PM
Zvita 4, 2008 na9:50 PM
Zvita 4, 2008 na9:58 PM
Dec 5, 2008 pa 9: 58 AM
Zvita 4, 2008 na10:10 PM
Just my 2 masenti.
Dec 5, 2008 pa 11: 47 AM
Zvita 5, 2008 na5:50 PM
Zvita 7, 2008 na9:59 PM
Jun 22, 2012 at 10:52 AM